I-Beach Dome No.3🌴Beach Front🐚Wifi Yamahhala 🙌🏼 King Bed✔️✔️ - I-Airbnb
I-Beach Dome No.3🌴Beach Front🐚Wifi Yamahhala 🙌🏼 King Bed✔️✔️
Indlu eyindilinga ibungazwe ngu-Georgia
Ukuphunyuka kwe-Unique Tropical Whimsy Beach okuguqula noma yiliphi iholide libe yinto enhle. Idizayinwe umakhi odumile u-'Dante Bini, i-Domes inomlingiswa kanye ne-charm ebonisa leli phakethe elincane elihle e-Tropical Far North Queensland. Le ndawo iyimfihlo futhi inamahlamvu kanye nokufakwa kwe-boutique experience. Indawo yaseBeach Front kanye nemizuzu nje ukusuka ezindaweni zokudlela zasendaweni. Vakashela idwala eliyisakhiwo sodumo elizungezile nehlathi lemvula noma mane ulale futhi ujabulele le ndawo yasendaweni eshisayo.
I-Beach Dome No.3 iyindlu yokulala eyi-Luxury Dome engu-1 enombhede ongaphezulu womcamelo ongusayizi ongu-1 nombhede ongusofa ongu-1 onegwebu elihlukile. Lesi sakhiwo esiphelele saseBeach Front silala abantu aba-4 ngokukhululeka. NjengeDome eziqukethwe ngokuphelele sikwazisa ngakho konke ukunethezeka kwe-boutique Apartment. Kuyizindlu ezi-1 kwezi-5 kule ndawo futhi inazo zonke izidingo ezidingekayo ukuze uhlale isikhashana noma isikhathi eside. Umbhede oyi-pillow top King size, I-air-con egcwele kuwo wonke amagumbi, Amafeni we-Ceiling, Indawo yokupaka yamahhala, i-Wi-Fi yamahhala, i-TV, ichibi lokubhukuda, ilondolo yesayithi, izicabha ezihlolwe ngokugcwele, izinto ezibalulekile zokuhlanza, izinto ezibalulekile zokuwasha, izinto ezibalulekile zasekhishini. kanye ne-grill yomphakathi yamahhala ye-BBQ' ogwini maqondana nje ne-Dome. Hlala phakathi kwezihlahla zesundu ezinhle, kanye nechibi lesitayela eliyi-hexagon elinomoya opholile waseNingizimu wePhasika ogeleza ungene eDome. Lena indawo ephambili yasebhishi, ene-patio yangasese futhi enamaqabunga. Ebhishi uzothola imisebenzi eminingi yamanzi eqashiwe kusukela kumabhodi okugwedla kuye kweye-jet sky kanye nenkundla yokudlala yamanzi yezingane e-Ocean. Ibhishi nalo liyagadwa futhi linonogada abaqaphile ngokugcwele. I-Trinity Beach ayizange ithintwe futhi inomphakathi othandekayo ozizwa ngayo. Iphinde ibe nezindawo eziningi zokudlela ezinhle eziphethwe abantu bendawo abaziqhenyayo ngemikhiqizo emisha. Ikhofi liyamangalisa futhi ama-fish n chips azofela. Unakho konke okudingayo lapha, akukho okusala ngaphandle kokucabanga.
4.81 · 138 okushiwo abanye
Le ndawo yakhelwe endaweni ethule yolwandle enezindawo zokudlela ezidumile nezindawo zokudlela ezinhle kanye namabhizinisi ambalwa endawo njengesitolo sotshwala nesaluni yobuhle.
Sihlala eduze, ngakho-ke uma udinga usizo singakusiza ngokushesha. Sijwayele ukungenisa izihambi futhi senze ubungane obuningi baphakade ngokuphatha i-dome. Asifaki ingcindezi noma isibopho ezivakashini zethu ukuthi zihlangane nathi uma zidinga ubumfihlo.
Sihlala eduze, ngakho-ke uma udinga usizo singakusiza ngokushesha. Sijwayele ukungenisa izihambi futhi senze ubungane obuningi baphakade ngokuphatha i-dome. Asifaki ingcindezi noma…